Panteisma - Wikipedia
Ny panteisma dia fampianarana filôzofika sady ara-pivavahana izay milaza fa ny fitambaran' ny zava-drehetra dia Andriamanitra. Tsy mifangaro amin' ny mônôteisma ny panteisma. Ny mônôteisma dia finoana ny fisian'Andriamanitra tokana mpamorona izao tontolo kanefa tsy mifangaro amin' izao tontolo izao fa sady ivelany sy amboniny (mihoa-draha) no manana sitrapo azy manokana (latina: persona).
Izany fampianarana ny amin' ny panteisma izany dia efa niseho nanomboka tamin' ny andron' ny neôplatonisma (nanomboka tamin' ny taonjato faha-3 taor. J.K.). Amin' ireo filôzôfa neplatonisiana dia fisehoan' Andriamanitra ny fomban' ny olombelona sy ny zava-misy iainany (panteisma akôsmika).
Ny hafa koa, indrindra ny filôzôfa hindoa, dia mampianatra fa ny fitambaran' ny zavatra rehetra, na dia miovaova sy manam-petra aza, dia ataony hoe Andriamanitra (panteisma kôsmika).
1 Fiforonan' ny teny hoe panteisma
2 Ny panteisma eo amin' ny sehatry ny fivavahana
2.1 Ny panteisma akôsmika
2.2 Ny panteisma kôsmika
3 Ny panteisma eo amin' ny filôzôfia tandrefana
3.1 Ny panteisma teo amin' ny filôzôfia grika
3.2 Ny panteisma eo amin'ny filôzôfia taty aoriana
Fiforonan' ny teny hoe panteismaHanova
Avy amin' ny fitambaran' ny teny grika hoe πὰν / pan ("manontolo") sy θεός / theos ("andriamanitra") ny teny vahiny (frantsay: pantheisme; anglisy: pantheism) nohagasina hoe panteisma. Tao amin' ny asa soratr' i John Toland tamin' ny taona 1720 atao hoe Pantheisticon, na raha ny marina kokoa, tao amin' ny asasoratr' i Joseph Raphson, tao amin' ny boky nosoratany hoe De Spatio Reali seu Ente Infinito tamin' ny taona 1697, izay nanavahany ireo panteista tamin' ireo ateista (frantsay: athées) sy tamin' ireo materialista: ny panteista dia ireo mpanao asa fandinihana manambara fa misy zavatra tokana tsy azo tsapain-tanana sady mana-tsaina izay namorona izao rehetra izao avy amin' ny tenany.
Ao amin' ny filôzôfia tandrefana, indrindra nanomboka tamin' i Spinoza dia nampitovizin-kevitra amin' ny hoe Natiora ny hoe πὰν / pan ("manontolo") amin' ny heviny mahafao-be, izany hoe "ny zavatra rehetra misy". Manao ny Natiora ho Andriamanitra ny panteisma.
Ny panteisma dia tsy afangaro amin' ny panenteisma izay ataon' i Hegel hoe "ao amin' Andriamanitra ny zava-drehetra" ka omeny anarana hoe akôsmika. Avy amin' ny fampianarana ny pateisma ihany ny panenteisma.
Ny panteisma eo amin' ny sehatry ny fivavahanaHanova
Nahitana hevitra mitovy amin' ny panteisma ireo fivavahana tao Azia Atsinana sy Atsimo talohan' ny taonjato faha-18, indrindra fa tao amin' ny sikisma, ny hindoisma, ny kônfosianisma ary ny taôisma. Ny firehena sasany ao amin' ny hindoisma dia azo sokajina ho panteista nefa ny sasany koa ho panenteista. Ny ao amin' ny hindoisma dia ahitana zavatra azo lazaina ho misy ifandraisany amin' ny panenteisma, pôliteisma, mônôteisma ary ateisma.
Ny panteisma akôsmikaHanova
Ny panteisma akôsmika fiheverana sy finoana fa tsy misy zava-misy marina afa-tsy Andriamanitra ka ny zavatra hafa rehetra dia sary fotsiny. Ny panteisma akôsmika dia hita indrindra ao amin' ny fivavahan hindoa, izay velabelarin'ny filôzôfa indina atao hoe Adi Shankara, mpiaro ny Advaita Vedanta. Izao ny hevitra tohanany amin' izany:
Tsy zava-misy marina ny zavatra manam-petra, dia ny zavatra rehetra voafetran' ny fotoana ka tsy maharitra izay sahala amin' ny lay manakona na koa manambara an' Andriamanitra mandrakizay, na bado na manam-pahaizana ianao.
Tsy misy ny ratsy: Andriamanitra dia any ivelan' ny atao hoe tsara sy ratsy, izay hevitra miankina amin' ny kolontsaina sy ny vanim-potoana. Ny fahoriana dia tsy inona fa valin' ny asa (hindo: karma) ratsy, feno fitiavan-tena, tao amin' ny androm-piainana lasa; ary ny fahoriana dia zava-mihelina ka tsy manam-pisiana marina sy maharitra ary fara tampony.
Ny fisian' ny olona tsirairay dia sarisary fotsiny. Ny fivavahana sy ny filôzôfia indiana rehetra dia mipombon-kevitra amin' i Adi Sankhara ny amin' izany, na ny fivavahana hindoa, na ny jainisma, na ny bodisma, na ny sikisma. Ny tanjom-pamonjena irin' ireo fivavahana ireo dia tsy ny fitehirizana ny maha olona manana ny maha izy azy ny tsirairay ao amin' ny fotoana, ny fihoarana tsy miova intsony, amin' ny alalan' ny Fanafahana amin' ilay sangondim-panin' ny fahatongavana ho nofo miverimberina ka hahafa-patorana ny tena zavatra ao amin' ny fiainana, izany fatorana izany dia ny fahaterahana indray ho zavaboary, ka hitambatra mandrakizay amin' ilay Fisiana fara tampony.
Ny panteisma kôsmikaHanova
Ny panteisma kôsmika dia mahafaoka ny fitambaran' ny zavatra rehetra manam-petra sy miovaova, voafetran' ny fotoana, izay ataony hoe Andriamanitra. Ny panteisma kôsmika hindoa dia mampitovy ny fitambaran' ny zavatra rehetra ao amin'ny tontolon' ny Fiovana, voafetran' ny fotoana, ireo fisehoan-javatra, ny Natiora (Prakriti), amin' ny andriamani-bavy, ohatra ny andriamanibavy Kali, izay fisehoana amin' ny lafiny fitolomana sy amin' ny maha reny ilay andriamanitra Shiva. Andriamanitra dia tsy inona fa ny fitambaran' ny zavatra rehetra ao amin' izao tontolo izao. Ny zavatra rehetra manam-pisiana dia ao amin' Andriamanitra ary Andriamanitra dia ao amin' ny fitambaran' ireo zavatra manam-pisiana ireo.
Ny hindoisma anefa dia mihevitra indraindray an' Andriamanitra ho manan-tsitrapo manokana (presôna) (araka ny sekolin' ny bhakti, dvaita vedanta, sns.), nefa ny advaita na ny samkhya dia mihevitra fa ny Prakriti (ny Natiora, izao rehetra izao amin' ny maha fisehon' Andriamanitra azy), sy i Shiva/Purusha (ny tena Fisian' Andriamanitra) dia miara-misy. Tsy afa-mametra na oviana na oviana ny fisiana marin' Andriamanitra izao tontolo izao izay miseho. Izao, ohatra, no voasoratra ao amin' ny Katha Upanishad 2-III-7 sy 8:
"Eo ambonin' ny sattva (fahazavana madio) no itoeran' ny Atman feno fiandrianana, ary eo ambonin' ny Atman feno fiandrianana no itoeran' ilay Tsy Miseho. Eo ambonin' ilay Tsy Miseho no itoeran' ny Purusha."
Noho izany dia Andriamanitra no ilay Miseho (izao rehetra izao), fa ilay Tsy Miseho dia any ankoatra. Amin' ny ankapobeny, afa-tsy ho an' ireo Shakta (izay mampitovy ny Andriamani-bavy Lehibe na ny Natiora (Prakriti) na ny Brahman), ny hindoisma dia tsy azo atao hoe panteisma hentitra (na panteisma kôsmika).
Ny panteisma eo amin' ny filôzôfia tandrefanaHanova
Sady tsy mpahary an' izao tontolo izao Andriamanitra no tsy misaraka aminy na amboniny. Zavatra iray ihany Andriamanitra sy izao rehetra izao. Tsy manam-petra Andriamanitra ka tsy afaka hisy ivelan' izao tontolo izao fa hiaty azy na hifangaro aminy.
Ny panteisma teo amin' ny filôzôfia grikaHanova
Mampianatra ireo filôzôfa grika stôikiana fa Andriamanitra dia Vatana - izany vatana izany dia tsy zavatra tsy manana aina fa velona, ka Andriamanitra no fanahy manetsika azy. Ny fanahin' ny olombelona dia ampahany amin' ilay fanahin' Andriamanitra.
Araka ny fampianaran' i Plôtino izay filôzôfa neôplatônisiana dia tsy namboarin' Andriamanitra ny zavatra samihafa izay manam-pisiana fa fahasimban' ny maha iray tsy mivaky an' Andriamanitra. Nivoaka avy amin' ny ilay Iray ny maro ka tsy tamin' ny alalan' ny famoronana izany fa amin' ny alalan' ny fiparitahana ao amin' ny fotoana sy ao amin' ny erana.
Ny panteisma eo amin'ny filôzôfia taty aorianaHanova
Araka ny hevitr' i Spinoza dia tsy noforonin' Andriamanitra ny zavatra manan-toetra vofetra fa ampahan' Andriamanitra, fisehoana manam-petran' ilay Fisiana tsy manam-petra ny zavatra rehetra. Tsy mino ny filazan' ny Baiboly ny amin' Andriamanitra i Spinoza. Ampahan' Andriamanitra ny olombelona satria ampahan' ny Natiora izay Andriamanitra. Tsy misy zavatra fantara ny amin' Andriamanitra izay tsy manam-petra afa-tsy ny Erana sy ny Eritreritra. Ny fanahin' ny olombelona dia singan' ilay Eritreritra ary ny vatany dia ampahan' ilay Erana tsy voafetra. Izany no nahatonga an' i Spinoza nihevitra fa azo atao ny mandinika an' Andriamanitra (ny Natiora) amin' ny fomba siantifika. Nisy akony tamin' ny filôzôfian' i Hegel sy tamin' ny filôzôfa hafa koa ny panteisman' i Spinoza.
↑ Ann Thomson, Bodies of Thought: Science, Religion, and the Soul in the Early Enlightenment, 2008, page 54.
↑ Ann Thomson, "Existe-t-il un républicanisme panthéiste au XVIIIème siècle ?" E-rea (Tahiry)
↑ John Culp, "Panentheism" [tahiry], The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008 (notsidihina tamin'ny 01 Aogositra 2015)
↑ Fowler, Jeaneane D., Perspectives of Reality: An Introduction to the Philosophy of Hinduism, 2002, Sussex Academic Press, pp. 15-32.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Panteisma&oldid=1000362"
Dernière modification le 14 Janoary 2021, à 11:55
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 11:55 ity pejy ity.